Mpanao labiera manao Wort, masirasira manao labiera-News-NingBo COFF Masinina Co., ltd
Mpanamboatra labiera manao labiera, masirasira manao labiera
Fotoana: 2020-07-10 Comment: 16
Ny fanaovana labiera lager dia teknika sy tsy mamela heloka, raha ny mpamaky labiera kosa ankehitriny dia mandray ny fanamby ary mampiasa fiara mifono vy mijidina, izay mihabetsaka hatrany ao amin'ireo labiera mpamokatra marika lehibe indrindra eto an-tany, mba hitazomana ny masirasira ho masirasira.
Tamboara mamirapiratra marindrano / brite tanky mazàna dia apetraka ao amin'ny efitrano misy halavany tsy ampy. Raha te hitahiry toerana kely dia azo apetraka amin'ny ambaratonga maro ny fiara mifono vy mba hampitomboana ny isan'ny tanky. Matetika ianao dia afaka mahita azy amin'ny teny eropeana noho ny olana taloha momba ny fananganana sy ny haavony.
Ny tsiro mangarahara momba ny masirasiran'ny masirasira lager dia midika fa kely kokoa ny kileman-toetra miafina ao aoriany, ary ny tsy fahampiana amin'ny fizotran'ny labiera na ny akora mampiavaka azy.
Rehefa mitombo ny lazan'ny style lager, ny labiera sasany dia mitady teknika voasedra ara-potoana mba hanamorana ny famokarana sy hihazonana ny masirasiran'izy ireo. Raha tokony ho fampangatsiahana mangatsiaka ao anaty sambo fermentation vy misy vy tsy miovaova na "unitanks" dia mamadika ny dingana taraiky eo amin'ny lafiny ara-bakiteny ny mpamaky labiera. Ny fitoeran-drano mitsivalana dia mahita trano ao amin'ny labiera kely mahaleo tena.
Mipetraha eto raha hifandray aminay.
Previous: Fomba famokarana ho an'ny baiko any Japon
Next: Ny vahiny japoney dia hahazo ny entan'ny labiera mamirapiratra sy ny tanky fermentation